မိုးကောင်းကင်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမအမေ ဧရာဝတီ
မန္တလေးမြို့အထက်နားရှိရွာတစ်ရွာမှ ဧရာဝတီဖြစ်ရေလျံနေစဉ် အမှတ်တရ ရိုက်ကူးလာပုံ
အနောက်ကောင်းကင်ထဲမှ တိမ်တိုက်လေးတွေ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုတွေရဲ့ ကြားမှာ… တစ်ရက်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးလို့ မကြာမှီ အိမ်ပြန်ခဏအနားယူတော့မယ့် နေမင်းကြီးဟာ… အလွန်လှပကြည့်ကောင်းနေပါသည်။ မိုးတိမ်တိုက်လေးတွေကြားထဲမှာ တိုးထွက်လာတဲ့ နေမင်းရဲ့ ဖျော့တော့တော့ အလင်းရောင်လေးတွေဟာ.. ဧရာဝတီမြစ်ပြင်ပေါ်ကို ရိုက်ခတ်ကျရောက်လာတဲ့အတွက် ကြည်လင်အေးမြပြီး တည်ကြည်ငြိမ်သက်စွာ စီးဆင်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင်ရဲ့ အလှဟာ ထပ်ဆင့်လို့ အလှလွန်ကဲနေပါတယ်…။ အဲဒီလို ညနေ-နေဝင်ဆည်းဆာရဲ့ အလှနဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ရေပြင်တို့ရဲ့ အလှတွေထဲမှာ ခံစားနစ်မျောနေစဉ်မှာပဲ… နားထဲမှာ အမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရတာတွေကတော့………
“သားရေ… ရေချိုးမပြီးသေးဘူးလား… သားရယ်.. တက်တော့လေ… သား”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေရဲ့… ရေက အခုမှ အရမ်းချိုးလို့ကောင်း၊ ကူးလို့ကောင်းတာ မေမေရဲ့.. သားလေ. အခုလို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးထဲမှာ.. အားရပါးရကူးခတ်ပြီး ရေချိုးရတာကို အရမ်းပျော်တာပဲ…. သိလား…”
“ သားလေ.. ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးရှိနေပြီးတော့ အခုလို ကြည်လင်အေးမြစွာနဲ့ စီးဆင်းပေးနေကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်.. ပြီးတော့လေ.. မေမေကို ပြောပြရအုံးမယ်သိလား…”
“ ဘာပြောမှာလည်း သားရယ်.. ပြောမှာဖြင့်လည်း အိမ်ရောက်မှပြောပြပါတော့… အခုရေချိုးနေတာကနေ တက်တော့နော်..သား.. တော်ကြာ အအေးမိနေမှာ စိုးလို့ပါသားရယ်…”
“ ဟာ… မေမေကလည်း… သားတို့က ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးဘေးမှာမွေးဖွားပြီးတော့ သားမွေးကတည်းက ဒီမြစ်ထဲမှာပဲ… အမေတို့ ရေချိုးပေးခဲ့တာပဲ မေမေရဲ့…။ ဒီအအေးဒဏ်တွေက သားတို့လို ဆင်းရဲ့သားတွေအတွက် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးသားပါဗျာ…။ အခု သားပြောပြမှာကလည်း… အခုလို ရေချိုးနေရင်း ပြောမှ ပိုပြီး ပြောလို့ ကောင်းတာဗျ..”
“ ကဲကဲ… မောင်လေအိုးရယ်.. ပြောမှာဖြင့် ပြောစမ်းပါအုံး.. သားက ဘာတွေများပြောမှာမို့ ဒီလောက်တောင်များ ပြောပြချင်နေရာတလဲ”
“ ဒီလိုမေမေ…ရဲ့…. သားတို့ မေမေတို့ မိသားစုအတွက်လေ.. ပိုက်ဆံ မကုန်ပဲ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် သဘာဝတရားကြီးက ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ ဟောဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရှိနေတာ ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းလည်းလဲဟင်.. ဟော.. သားတို့ကသာ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးရှိနေလို့ သားတို့အတွက် ရေသောက်ဖို့၊ ရေချိုးဖို့ သုံးဖို့ ရေကူးဖို့အတွက် အချိန်မရွေး အလကားသုံးလို့ ရနေတာလေ… မြို့ပေါ်မှာနေကြတဲ့သူတွေ ကြည့်စမ်းပါမေမေရယ်.. သုတို့ခမျာ… ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းလဲ? ရေသောက်ဖို့ ဆိုရင်လည်း ရေသန့်ဖူးတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်သောက်ရတယ်လေ။ ပြီးတော့ ရေကူးချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ရေကူးကန်သွားပြီး ပိုက်ဆံပေးပြီးမှ ကူးရတယ်။ သူတို့မှာလည်း ပိုက်ဆံ ချမ်းသာလို့ တော်သေးတာပေါ့နော်။ သားတို့လိုများ ဆင်းရဲရင် သူတို့ဘဝလေးတွေက သနားစရာပဲနော်…။ ပြီးတော့လေ… မြို့ပေါ်မှာ ရေက လုံလောက်အောင် မပေးနိုင်တော့ တစ်ချို့ဆိုရင် ရေတောင် နေ့တိုင်း မချိုးနိုင်ကြဘူးလို့ ကြားတယ်ဗျ။ သူတို့က ပြောကြသေးတယ်နော်. သားတို့ ဆင်းရဲသားတွေကိုကျတော့ ညစ်ပတ်လို့တဲ့လေ။ သားတို့ကမှ ရေနေတိုင်း ချိုးနိုင်သေးတယ်။ သူတို့ကမှ ရေ နေ့တိုင်းမချိုးနိုင်ကြတော့ သူတို့က ပိုပြီး ညစ်ပတ်ကြတာပေါ့နော်….ဟုတ်တယ် မို့လား မေမေ…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ… ကျွန်တော်လေ… ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီး စီးဆင်းတည်ရှိနေတာကိုပဲ.. အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ… ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ထာဝရ တည်တံ့စီးဆင်းနေနိုင်ပါစေလို့ သားဆုတောင်းပေးနေတော့မယ်ဗျာ.။”
“ အေးအေး.. ဆုတောင်းလည်း ဆုတောင်း.. သားလည်း ရေကူးတာရေချိုးတာကနေ တက်ခဲ့တော့နော်…”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါမေမေ.. သားတက်ခဲ့တော့မယ်နော်.. ရေကူးရတာလည်း မောသွားပြီ…. ဟူး………… မောလိုက်တာ….”
မန္တလေးမြို့ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာ နေထိုင်ကြသော လူနေအိမ်ကလေးများ
ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင်နှင့် မန္တလေးမြို့ မရမ်းခြံဆိပ်ကမ်းအလှ
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ ကမ်းနဘေးမှာနေထိုင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ရေနဲ့ မိသားစုတစ်စုလုံးရဲ့ အဝတ်အစားတွေ လျော်ဖွတ်နေသော မိခင်နှင့် ရေချိုး၊ရေကူးရင်း လေပေါနေသော သားတော်မောင်တို့ရဲ့ စကားသံများ အဆုံးမှာတော့…. ကျွန်တော့်ရဲ့ အထွေးတွေဟာ… လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀) ခန့်ဆီသို့ လွှင့်မျောသွားခဲ့ပါတော့တယ်……….
“ သားရေ… ထမင်းစားရအောင်လေ.. သား…”
“ ဟုတ်ကဲ့… လာပြီ မေမေ… ဒီနေ့ ဘာဟင်းတွေ ချက်ထားလဲဟင်”
“ငါးဟင်းချက်ထားတယ်လေ.. သားရဲ့.. ပြီးတော့ ငါးပိရည် ရယ် ပဲပြုတ်ရယ်လေ…”
“ဟာ… ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေပဲနော်.. တို့မေမေကတော်တော် အလိုက်သိတာပဲ နော်။ သူ့သားကြိုက်တဲ့ ငါးဟင်းတို့ ငါးပိရည်တို့ကို အမြဲ ချက်ကျွေးတာပဲနော်..”
“ အေး… ဒီဟင်းတွေကို မင်းမကြိုက်လည်း စားရမှာပဲ… ကြိုက်လည်း စားရမှာပဲ… မေမေတို့မှာ ကောင်းကောင်းစားစရာ ဆိုလို့ ဒီဟင်းတွေပဲ ချက်စားစရာ ရှိတာနော်..”
“ဒါပေ့ါ မေမေရဲ့… သားတို့လို ဆင်းရဲသားတောသူ တောင်သားတွေမှာ.. ငါးဟင်းနေ့တိုင်းစားနိုင်ကို ကျေးဇူးတင်လှပြီလေ..။”
“ဒါပေါ့ သားရဲ့.. မေမေတို့သားတို့အခုလို ငါးဟင်းကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်စားနိုင်တာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ သားသိလား…”
“အာ.. သား သိတာပေါ့ မေမေရ.. ရွာမြောက်ပိုင်းက ဦးလေးတင် တို့ ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ဗျ.။ သူတို့က ငါးဖမ်းတာ အရမ်းတော်တာပဲနော်။ ပြီးတော့လေ.. မြစ်ထဲက ငါးတွေလည်း အများကြီးရအောင် ဖမ်းနိုင်တယ်နော်..”
“ဟုတ်ပါတယ် သားရယ်.. သားပြောသလို ဦးလေးတင်တို့က ငါးတွေကုို ဖမ်းပြီးတော့ ပြန်ရောင်းချပေးလို့ မေမေတို့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဝယ်စားရလို့ ကျေးဇူးတင်ရသလို… အဓိက ကျေးဇူးတင်ထိုက်တာက ငါးတွေအများကြီးရအောင် ဖမ်းပေးတဲ့ ဦးလေးတင်တို့ မဟုတ်ဘူးကွဲ့…”
“မေမေတို့ သားတို့ အခုလို ငါးတွေကောင်းကောင်းစားနိုင်အောင် အဓိက ကျေးဇူးတင်ထိုက်တာက သားတို့မေမေတို့ စားလို့ရအောင် ဦးလေးတင်တို့ ငါးတွေများများဖမ်းနိုင်အောင်လို့ အဲဒီငါးတွေကို ရှင်သန်ကြီးထွားအောင် မွေးမြူပေးထားတဲ့ ဟောဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာကွဲ့….”
“ဟုတ်ကဲ့ မေမေ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအကြောင်း ဆက်ပြောပါအုံး မေမေ…”
“သားက ပြောပြအုံး ဆိုတော့လည်း မေမေက မေမေသိသလောက် ပြောပြရမှာပေါ့ သားရယ်…။ အခုသားတို့ မေမေတို့ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် စားနေတဲ့ ထမင်းတွေလေ.. အဲဒီထမင်းတွေ ဖြစ်လာအောင် ဖန်ဆင်းပေးတာလည်း ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးကြောင့်ပဲ သား။ ဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ သားတို့ မေမေတို့ရဲ့ အသက် သခင်ကျေးဇူးရှင်လေ…။ သားတို့ မေမေတို့တင်မကဘူးလေ… ဟောဒီမေမေတို့ရွာတစ်ရွာလုံး၊ ဟောဟို တစ်မြို့လုံး…။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပြင် တစ်ခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင် လို့တောင်ပြောနိုင်တယ် သား…”
“ဟုတ်ကဲ့ မေမေ.. ဘာလို့ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးက သားတို့ တိုင်းပြည်အပြင် တခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်လို့ ပြောရတာလဲဟင်…”
“ဒီလိုသားရဲ့… ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးကရေတွေက တစ်နှစ်ပတ်လုံး စီးဆင်းနေတာသားတွေ့တယ်မို့လား.. ရေနည်းသွားတာနဲ့ များလာတာပဲ ကွာတယ်လေ..။ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးကနေ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ အခုသားတို့ စားနေတဲ့ ထမင်းဖြစ်လာမယ့် စပါးတွေ စိုက်ပျိုးရတယ်၊ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး အခုလို ထမင်းတို့ ဟင်းတို့ဖြစ်လာအောင် ချက်ပြုတ်ရတဲ့ ထင်းတွေဟာလည်း ဒီမြစ်ကြီးထဲမှာ မျောပါလာတာတွေကို ဆယ်ယူပြီးတော့ သုံးရတာလေ.. ။ ဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မေမေတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖျားဆုံးကနေမှ တောင်ဖျားဆုံးထိ ရောက်အောင် စီးဆင်းသွားပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကို စီးဝင်သွားတယ်လေ…။ ဒီဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတစ်လျောက် မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းကနေ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းအထိ ဒီဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဆန်၊စပါးတွေ၊ ကောက်ပဲ သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးကြတယ်၊ ပြီးတော့ မြစ်အထက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့ မြစ်လယ်ခေါင်မှာပဲ ရွှေ၊ငွေ၊ ကျောက်သံ၊ ပတ္တမြားတွေ တူးဖော်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရတယ်လေ..။ အဲဒီလို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတဲ့ သူတွေဆီကနေမှ ပိုလျှံလို့ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဆန်စပါးတွေ၊ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ၊ ရွေငွေ၊ ကျောက်သံ၊ ပတ္တမြားဆိုတဲ့ ရတနာတွေကို မေမေတို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံက ဝယ်ယူအသုံးပြုစားသောက်ရတဲ့ အပြင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုပါ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ လူသားအားလုံးရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မွေးမိခင်ကြီးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တာပေါ့သားရယ်…။”
“ဒါကြောင့်… ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ.. သားတို့၊ မေမေတို့ရဲ့ အမေလို့ ပြောနိုင်သလို မေမေတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမေ၊ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်ပေါ့ကွယ်…”
“တကယ်လို့လေ.. သားတို့ရဲ့ မွေးမိခင် မေမေ သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ.. သားဘဝမှာ မေမေတစ်ယောက်ပဲ ဆုံးရှုံး နစ်နာသွားမှာလေ…။ တကယ်လို့သာ… မေမေတို့သားတို့၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့ရဲ့ မိခင် ဧရာဝတီ မေမေကြီးသာ ကွယ်ပျောက် သေဆုံးသွားခဲ့မယ် ဆိုလျှင်… မေမေတို့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူသားအားလုံးရဲ့ အသက်တွေ အပြင် အခုမေမေတို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးပါ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်တာပေါ့သားရယ်…. ဒါကြောင့်လေ.. သားရဲ့မေမေ… ငါဟာလေ… သားရဲ့ ဒုတိယ မေမေပါ။ သားတို့ ပထမ အမေက ဟောဒီ ဧရာဝတီပါသားရယ်…။ ဒီလိုပဲ မေမေရဲ့ မွေးမိခင်ဟာလည်း မေမေရဲ့ ဒုတိယ အမေဖြစ်သလို မေမေတို့ရဲပထမ အမေဟာ လည်း ဟောဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ပဲဖြစ်တယ်… သား…။ ဒီလိုပဲ မေမေတို့ မြန်မာတွေရဲ့ အသက်၊ မြန်မာတွေရဲ့ ပထမ အမေဟာ… ဟောဒီ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာ .. သားစွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားစေချင်တယ်နော်……………..။”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒုတိယမေမေ… သားရင်ထဲ စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါ့မယ်.. သားတို့ရဲ့ ပထမအမေဟာ ဟောဒီ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ဖြစ်ပါကြောင်း သားရဲ့ နှလုံးသားမှာ ကဗျည်းကျောက်စာ ရေးထိုးထားလိုက်ပါပြီ… ဒုတိယမေမေနော်….”
မန္တလေးတောင်ကို ဧရာဝတီ မြစ်ပြင်ပေါ်မှ အမှတ်တရ လှမ်းယူရိုက်ကူးထားပုံ
ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါးဘေးရှိ တောတောင်များပေါ်မှ စေတီပုထိုးများရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ် အလှတရား
အော်… လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) လောက်က မေမေပြောခဲ့တဲ့ ပထမအမေဆိုတာ.. ဧရာဝတီဆိုပါလား… ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အသက်ဆိုပါလား… ဧရာဝတီကွယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်… တစ်နည်းအားဖြင့်.. မေမေပြောသလို ပထမအမေ သေဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လည်း ကွယ်ပျောက် သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပါလား……..
ဒါဆိုရင်… ဧရာဝတီ မကွေယ်ပျောက်ရအောင်…
ပထမအမေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပြီး ထာဝရရှင်သန်စီးဆင်းနေနိုင်အောင်ဆိုရင်… အမေ့(ဧရာဝတီ)ရဲ့ သားတွေသမီးတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ တာဝန် ရှိတာပေါ့နော်…။
အော်… အမေရယ်… အမေ့ကိုလေ… သားတို့ သားသမီးတွေအားလုံးက ထာဝရအသက်ရှင်သန်တည်မြဲနေချင်ပေမယ့်လည်း… အမေ(ဧရာဝတီ)က မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ တစ်ချို့သောသားတွေက သူတို့ရဲ့ ပေါက်ဖော်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အမေကို ပုန်ကန်ဖို့ လုပ်နေကြပြီလေ… အမေ…။ သူတို့ အမေ့ကို အကျဉ်းချကြတော့မယ်… အမေ့ကို သူတို့ ရောင်းစားကြတော့မယ်…၊ အမေ မျက်ရည်ကျရပြီနော်…၊ အမေမျက်ရည် မကျရအောင် အမေ မသေရအောင် သားတို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ် အမေရယ်… သားတို့အားလုံး ဝိုင်းဝန်းတိုင်ပင်ပြီး… အမေ့ကာကွယ်ကြရအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်.. အမေရယ်… ။ အမေ့ရဲ့ တစ်ချို့သော သားတွေကပြောသေးတယ်.. သိလား အမေ… သူတို့က အမေ့ကို ပုန်ကန်တာ၊ အကျဉ်းချဖို့လုပ်တာ ၊ ရောင်းစားဖို့လုပ်တာဟာ... သားတို့အားလုံး. ကောင်းစားဖို့အတွက် လုပ်တာပါလို့ .. ပြောကြတယ်.. အမေရယ်.. သူတို့ပြောတာကို ဘယ်သားသမီးကမှ မယုံကြပါဘူး အမေရယ်…… ဟိုတစ်လောကလေ.. အမေ့ရဲ့သားတွေ အားလုံးကို အမေ့ကို ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ ကြားထဲကပဲ.. အမေ့ရဲ့.. သားတစ်ယောက်က ပြောသွားသေးတယ်လေ… အမေကြားလိုက်မလား အမေ… အမေ အဲဒီစကားများ ကြားရင် အမေ ဘယ်လောက် ဝမ်းနည်းပူဆွေး.. ငိုကြွေးနေမလဲ ဆိုတော့ သားတို့ မှန်းဆလို့ ရပါတယ် အမေရယ်… ။ အမေ့သားပြောသွားတာကလေ… အမေ့ကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်… တားဆီးနေပါစေ… သူကတော့ အမေ့ကို ဆက်ပြီး အကျဉ်းချဖို့… ရောင်းစားဖို့… လုပ်မယ်လို့ ပြောသွားခဲ့တယ်လေ.. အမေရဲ့….။ ဒီစကားတွေများ အမေကြားရရင် အမေသားတွေအားလုံးအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးပြီး ငိုကြွေးနေမယ်ဆိုတာ သားတို့အားလုံး သိနေပါတယ် အမေရယ်..။ အမေဟာလေ… သားတွေရဲ့ အပေါ်မှာ အကောင်းအဆိုး မခွဲခြားပဲ.. ပြုံးပြုံးကြီး ရပ်တည်ရှင်သန် စီးဆင်းသွားလာနေပေမယ့်လည်း… အမေရဲ့ ရင်ထဲမှာ… အမေ(ဧရာဝတီ) ငိုကြွေးနေတယ်ဆိုတာ.. သားတို့အားလုံး သိနေကြပါပြီ… အမေရယ်….
အမေငိုနေရလို့… သားတို့လည်း ငိုနေရပါပြီ အမေရယ်…
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ အမေ(ဧရာဝတီ) မငိုရအောင်…
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ပထမ အမေ(ဧရာဝတီ)… မငိုရအောင်…
အမေ(ဧရာဝတီ)ရဲ့ သားတွေ အားလုံးလည်း …… မငိုရအောင်…
ပထမ အမေ(ဧရာဝတီ)ရဲ့ သားတွေ အားလုံးလည်း ……. မငိုရအောင်….
သားတို့အားလုံးရဲ့ ပထမ အမေ (ဧရာဝတီ) မငိုရလေအောင်… ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအားလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ကြရအောင်လားဗျာ…….။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 6:25 PM
လွမ်းမော်ဖွယ် ဧရာဝတီ စာစုလေး ကို ဖတ်သွားတယ် အင်း ဘယ်လိုများ ကယ်တင်ရပါ့မလည်း
ဧရာဝတီအကြောင်းလေးကို ဖတ်သွားပါတယ် ဧရာ မြစ်မင်းးးးးထာဝရ စီးဆင်းစေဖို့
ဧရာဝတီရဲ့ရင်မှာမွေးပြီး ဧရာဝတီရဲ့လက်ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကိုဇော်သိင်္ခရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်များကို နားလည်ပါတယ်.. အချိန်ပေးပြီး ရေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ....
ဧရာဝတီကို နှမျောသတတဲ့သူချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ တို့ နေထိုင်ဖို့ 
အမေသာမရှိတော့ရင်.....(ဆက်တောင် မတွေးချင်တော့ဘူး။)း((((